Umzi mveliso wencwadi |
Zeziphi iiphazili zomthi ezinemilinganiselo emithathu ezinokuzisa uvuyo ebantwaneni?
Izinto zokudlala zihlala zidlala indima ebalulekileyo kubomi babantwana. Nokuba umzali obathandayo abantwana uya kuziva ediniwe ngamanye amaxesha. Ngeli xesha, akunakuphepheka ukuba neethoyi zokunxibelelana nabantwana. Zininzi izinto zokudlala kwintengiso namhlanje, kwaye ezona zinxibelelanayo zizinto zeplanga zejigsaw ...
Zeziphi izinto zokudlala ezinokuthintela abantwana ukuba bangaphumi ngexesha lobhubhane?
Oko kwavela ubhubhane, abantwana kuye kwafuneka ngokungqongqo ukuba bahlale ekhaya. Abazali baqikelela ukuba basebenzise amandla abo ukuze badlale nabo. Ayinakuphepheka into yokuba kuya kubakho amaxesha apho bengakwazi ukwenza kakuhle. Ngeli xesha, amanye amakhaya angafuna into yokudlala enexabiso eliphantsi ...
Iithoyi eziyingozi ezingenakuthengelwa abantwana
Izinto zokudlala ezininzi zibonakala ngathi zikhuselekile, kodwa kukho iingozi ezifihlakeleyo: ezingabizi kwaye ezingaphantsi, eziqukethe izinto eziyingozi, eziyingozi kakhulu xa udlala, kwaye zinokonakalisa ukuva nokubona kosana. Abazali abanakuzithenga ezi zinto zokudlala nokuba abantwana bayazithanda kwaye bayakhala bazicele. Xa izinto zokudlala ziyingozi ...
Ngaba abantwana bayakudinga nokudlala ngoxinzelelo?
Abantu abaninzi bacinga ukuba iithoyi zokunciphisa uxinzelelo kufuneka zenzelwe ngokukodwa abantu abadala. Emva kwayo yonke loo nto, uxinzelelo olufunyanwa ngabantu abadala kubomi bemihla ngemihla lwahluke kakhulu. Kodwa uninzi lwabazali aluzange luqonde ukuba nomntwana oneminyaka emithathu ubudala uya kufingqa ngamanye amaxesha ngokungathi bayacaphukisa. Ngokwenyani i ...
Ngaba Luya kubakho naluphi na utshintsho xa abantwana bevunyelwe ukudlala ngeethoyi ngexesha elimisiweyo?
Okwangoku, ezona ntlobo zithandwa kakhulu zezinto zokudlala ezivenkileni kukuphuhlisa iingqondo zabantwana kwaye zibakhuthaze ukuba bazenze ngokukhululekileyo zonke iintlobo zeemilo kunye nemibono. Ngale ndlela kunokunceda abantwana ngokukhawuleza basebenzise izandla kunye nezakhono zokusebenza. Abazali babizelwe ukuba bathenge iithoyi zamaqabane ahlukeneyo ...
Ngaba inani leeToyi liyakuchaphazela ukukhula koBantwana?
Njengoko sonke sisazi, iithoyi zidlala indima ebaluleke kakhulu kubomi babantwana. Nabantwana abahlala kwiintsapho ezingathathi ntweni bafumana izihlandlo zokudlala kubazali babo. Abazali bakholelwa ukuba iithoyi azizisi uvuyo kuphela kubantwana, kodwa zibanceda bafunde ulwazi oluninzi olulula. Siza kufumana ...
Kutheni le nto abantwana behlala befumana abanye abantu bezinto zokudlala benomtsalane ngakumbi?
Unokuhlala uva abanye abazali bekhalaza ukuba abantwana babo bahlala bezama ukufumana ezinye izinto zokudlala zabantwana, kuba bacinga ukuba iithoyi zabanye abantu zintle kakhulu, nokuba banohlobo olunye lwezinto zokudlala. Eyona nto imbi kukuba, abantwana beli xesha abanakubaqonda abazali babo ...
Ngaba ukukhetha kwabantwana iithoyi kungabonakalisa ubuntu babo?
Wonke umntu kufuneka afumanise ukuba kukho iintlobo ezingaphezulu nangaphezulu zeethoyi kwintengiso, kodwa isizathu sikukuba iimfuno zabantwana ziya ngokuya zisanda. Uhlobo lwezinto zokudlala ezithandwa ngumntwana ngamnye zinokwahluka. Ayisiyiyo loo nto kuphela, nkqu nomntwana ofanayo uya kuba neemfuno ezahlukeneyo zoku ...
Kutheni le nto abantwana kufuneka badlale iipuzzle zePlastiki kunye neenkuni?
Ngophuhliso olwahlukeneyo lweethoyi, abantu ngokuthe ngcembe bafumanisa ukuba iithoyi ayisiyonto nje yabantwana yokuhambisa ixesha, kodwa sisixhobo esibalulekileyo ekukhuleni kwabantwana. Iithoyi zamaplanga zemveli zabantwana, izinto zokudlala zabantwana kunye nezinto zokudlala zeplastiki zinikwe intsingiselo entsha. Uninzi pa ...
Kutheni le nto abantwana bethanda ukudlala iidola?
Abantwana bahlala bathanda ukulinganisa indlela yokuziphatha kwabantu abadala kubomi babo bemihla ngemihla, kuba bacinga ukuba abantu abadala banokwenza izinto ezininzi. Ukufezekisa intelekelelo yabo yokuba ziinkosi, abayili bezinto zokudlala ngokukodwa bazenzele izinto zokudlala zodonga. Kusenokubakho abazali abanexhala lokuba abantwana babo ...
Ngaba Kumnandi Ukuvumela Abantwana Bazenzele Ezabo Izinto Zokudlala?
Ukuba usa umntwana wakho kwivenkile yokudlala, uya kufumana ukuba izinto zokudlala ezahlukeneyo ziyamangalisa. Kukho amakhulu eplastiki kunye nezinto zokudlala ezenziwe ngomthi ezinokuthi zenziwe iithoyi zokuhlamba. Mhlawumbi uya kufumanisa ukuba uninzi lweethoyi alunakwanelisa abantwana. Ngenxa yokuba kukho zonke iintlobo zeengcamango ezingaqhelekanga kwi-chi ...
Ubaqeqesha njani abantwana baCwangcise iithoyi zabo?
Abantwana abazi ukuba zeziphi izinto ezilungileyo, kwaye zeziphi izinto ezingafanelekanga ukwenziwa. Abazali kufuneka babafundise izimvo ezichanekileyo ngexesha eliphambili labantwana babo. Uninzi lwabantwana abonakalisiweyo baya kubaphosa phantsi xa bedlala iithoyi, kwaye ekugqibeleni abazali baya kubanceda benze amalungu ...